Tarsan ?bixinta aqoonsiga qofka waxay qayb tahay dagaalka ka dhanka ah xubanaha Al-shabaab? – Radio Daljir
Janaayo 6, 2014 2:00 b 0
Muqdisho, January 6, 2014 – Garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa la hubin doonaa hadda kadib dadka dibeda u dhoofaya iyo kuwa soo degaya, howshaas ayaa qayb ka ah dagaalka lagula jiro Al-shabaab, sida uu sheegay duqa Muqdisho Maxamed Axmed Nuur.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Tarsan ayaa shaaciyey inay dhamaatay in sarkaal dambe oo ka tirsan al-shabaab uu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, taas oo dhici jirtay iyadoo aan aqoon loo lahayn.
Mudane Tarsan ayaa xusay in bixinta aqoonsiga iyo Baasaboorka dalka ay qayb ka tahay qorshaha lagu oggaanayo hugaamiyaasha argagixisada.
?Inaan oggaano xaasaska iyo caruurta iyo hugaamiyaasha Al-shabaab ayaa ka qayb ka ah in la helo aqoonsiga dadka ee haatan la bixinayo, taas ayaa sahlaysa inaan Al-shabaab dambe ka dhoofin Aadan Cadde Airport.? Ayuu yiri Maxamed Axmed Nuur Tarsan
Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in meelaha laga qaato Baasaboorka iyo aqoonsiga la dhigay computer lagu aruurrinayo xogta qofka oo dhamaystirsan ?hadhow qofka dhoofaya waxaa laga qaadi doonaa faro.? ?waxaan bilaabi doonaa qaadista DNA, waxay qayb ka tahay qorshaha lagu adkaynayo amniga.? Ayuu yiri Tarsan
Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa dhowaan laga furay xafiis lagu qaado aqoonsiga dhalashada, sugnaanta iyo cadaynta Soomaalinimada, wuxuuna qayb ka ahaa mashruuc balaaran oo dib loogu furay Baasaboorka Soomaaliga oo hab casri ah loo dhigay.